Amabhishi acwebezelayo, amanzi e-cristal ahlanzekile kanye nomlando omncane enza ama-Andam ithuba elihle lokukhethwa kwekhefu elihlelekile, elijabulisayo, ngezinyawo ezinde, elizulazula eziqhingini zasolwandle futhi, ukuze kube lula kakhulu, ukudilika kolwandle olujulile. Kusuka edolobheni elinamasiko amaningi ePort Blair kuya emabhishi amhlophe ase-Neil nase-Havelock Islands nasemaphandleni omlilo we-Diglipur, i-Andamans inikeza okuthile kubo bonke abavakashi. Inamanye amabhishi amahle kunawo wonke e-Asia aphuma ngaphandle kwephephandaba le-tropical paradise noma umkhumbi womagazini wokuhamba. Leli qembu leziqhingi lingenye yezindawo ezikude kakhulu emhlabeni. Lolu hambo luzokunika ithuba lokuhlola kulezi zibhebhe futhi ube neholide elihlelekile elihlelekile.
Ama-05 Nights / izinsuku ze-06 | Ikhodi Yokuvakasha: 030
DAY 01: I-PORT BLAIR
Lapho sifika esikhumulweni sezindiza sasePort Blair, ummeleli wethu uzothola futhi adlulisele ehhotela. Ngemuva kokungena ehhotela futhi singaphumuli kancane, sizoqala ukubuka indawo nge-Anthropological Museum, ekhombisa amathuluzi, izindawo zokuhlala, ubuciko kanye nemikhumbi yezandla zezizwe zase-Andaman & Nicobar Islands ezivela kobuzwe base-Anthropological Museum, siya eCorbyn's Cove ibhishi. I-Light & Sound Show kuJaji Cellular: Kusihlwa, sithuthela i-Light and Sound Show ku-Cellular Jail lapho i-saga yomzabalazo wenkululeko iphiliswa khona.
I-DAY 02: IPORT BLAIR - ISLANDO SASE-ROSS - ISLANDO SASE-NORTH BAY (ISORLAND ISLAND) - I-HARBOR CRUISE (I-VIPER ISLAND)
Namuhla, emva kokudla kwasekuseni sizoqhubeka nokuhamba ngezinsuku ezigcwele ukuya eRosss, eNorth Bay (eCoral Island) naseViper Island (i-Harbour Cruise). I-Ross Island: Okokuqala siqala uhambo olujabulisayo oluya eRoss Island, inhloko-dolobha yasePort Blair ngesikhathi sokubusa kwaseBrithani, manje isiyinkimbinkimbi enkulu, futhi isakhiwo sinama-debris. Imyuziyamu encane ibonisa izithombe kanye nezinye izidakamizwa zeBritishers, ezifanele kulezi ziqhingi. I-North Bay (iCoral Island): Ukusuka eRoss Island, siyaqhubeka sijabule esiqhingini saseNorth Bay (iCoral Island) sinika amakhorali ayingqayizivele, izinhlanzi ezimibalabala nokuphila kwamanzini angaphansi kwamanzi. Singakwazi ukubuka le mibala yamakhorali nembala engaphansi kwamanzi nge-glass glass bottom and snorkeling (ozikhethela). I-Harbour Cruise (i-Viper Island): Ngomuso-ntambama, sihamba ngesikebhe sechweba, umbono we-panoramic ngamaphuzu angu-7 avela olwandle okuyi-harbor, ama-docks athambile, njll kubandakanya uhambo oluya eViper Island endaweni yokubulawa.
DAY 03: IPORT BLAIR - ISLANDO SOKUKHULUZA
Namuhla, siqala uhambo lwethu oluya eHavelock Island ngesikebhe esivela ePort Blair Harbour. Lapho sifika eHavelock Island, ummeleli wethu uzokuthola futhi akuhambise ukuze ungene ku-resort. Imisebenzi yokuzilibazisa ekhethwa e-Havelock Island: Uhambo lwe-Snorkeling oluya e-Elephant Beach: Rs.750.00 Ngomuntu (kufaka phakathi izikebhe ze-Private Boat, Guide & Snorkeling)
USUKU LWE-04: ISLANDO SOKUKHULULELA- I-PORT BLAIR
Ngemuva kokudla kwasekuseni, siya e-Radhanagar Beach (i-Beach No. 7), i-Times Magazine inqume ibhishi elihle kunabo bonke phakathi kwamabhishi angcono kakhulu e-Asia. Liyindawo ekahle yokubhukuda, ukugeza olwandle nokusibekela ebhishi elangeni elanga. Ngemuva kwemini sibuyela emuva ePort Blair (ngesikebhe) bese sihlala ePort Blair ebusuku.
DAY 05: IPORT BLAIR
Ngemuva kokudla kwasekuseni, sikuyisa ekuvakasheni kwedolobha lasePort Blair elihlanganisa iJaji leCellar (I-Memorial Memorial), i-Chatham yabona isilongwe (i-oldest and larger mills e-Asia), i-Forest Museum, i-Samundrika (i-Naval Marine Museum), isayensi ye-Science, i-Gandhi Park , Marina Park, i-Andaman Water Sports Complex. Ukuthenga: Kusihlwa, siya eSagarika (i-Govt Emporium of Handcraft) nomakethe wendawo wezitolo.
USUKU LWE-06: HLELA KU-ANDAMAN ISLANDS
Yehla ePort Blair / Esikhungweni Sokubuya Ngokuhamba ngezinkumbulo ezinhle zeholide.